ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့လမ်းလျှောက်တာဘယ်လောက်ကြာမလဲ? | Dogs World
ကလေးငယ်တစ် ဦး ကိုမွေးစားသောအခါကလေးတွင်သံသယများစွာရှိသည်။ ကျနော်တို့သူ့ကိုကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူကဘာမှမလိုအပ်ဘူးဆိုတာသေချာစေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့လမ်းလျှောက်မှုဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မကြာခဏမသိဘူး။
အရွယ်ရောက်ပြီးသောခွေးတစ်ကောင်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာလမ်းလျှောက်နိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးငယ်သည်တစ်နေကုန်ထွက်ရန်အလွန်ပျော်မည်မဟုတ်ပါ။ 🙂ထို့နောက်ကြည့်ရအောင် တစ်နေ့သူ / သူမလေ့ကျင့်ရန်သင်မိနစ်မည်မျှရှိသနည်း.
သင်သည်တစ်နေ့လျှင်မည်မျှလေ့ကျင့်သင့်သည်ကိုသိရန်သင်၏အိပ်ချိန်မည်မျှရှိသည်ကိုသိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စောင့်ရှောက်သူများအနေဖြင့်သင်၏အိပ်ချိန်ကိုလေးစားရမည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထိုသို့မပြုလုပ်ပါကသင့်ကျန်းမာရေး (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်မျိုးလုံး) ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သောကြောင့်, သင်ဘယ်လောက်အိပ်ဖို့လိုအပ်သလဲ ကျနော်တို့ကြည့်တော့မယ်ဆိုရင်အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်လိမ့်မယ်။
၆ လမှ ၁၂ လအထိ: တစ်ရက်လျှင် ၁၈-၂၀ နာရီ။
၃ လမှ ၁၂ လအထိ (ထိုထက်နည်းသည်) ၁၆-၁၈ နာရီ / နေ့။
12 လမှစ: တစ်ရက်လျှင် ၁၈-၂၀ နာရီ။
ဒါပေမယ့် ... သင်တစ် ဦး တည်းလူရှုပ်အတွက်အိပ်ပါသလား? အမှန်တရားကတော့မဟုတ်ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်ညတွင် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိအိပ်မည်ဟု furry များရှိသော်လည်းတစ်နေ့လုံးအိပ်ငိုက်နေလိမ့်မည်။ ဘယ်ကိစ္စမဆို, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွေးကလေးကငြီးငွေ့နေတာကိုမြင်ရင်သူ့ကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ရမယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဖျားနာဖို့အချိန်ယူမှာမဟုတ်ဘူး။
ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုကတော့၊ လမ်းလျှောက်ထွက်ယူပါ။ ဒါပေမယ့်မိနစ်ဘယ်လောက်လဲ။ တနည်းကား၊ ၎င်းသည်အသက်ပေါ်တွင်များစွာမူတည်လိမ့်မည်။ အငယ်ဆုံးခွေးကလေးသည် ၁၀ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်သာလမ်းလျှောက်နိုင်သော်လည်းအသက်အကြီးဆုံးသည်သူထွက်သွားတိုင်းမိနစ် ၂၀ မှ ၃၀ လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။။ လမ်းလျှောက်ရတာပျော်စရာကောင်းပြီးသာယာဖို့လိုတယ်၊ ဒါကြောင့်ကြိုးကြိုးတပ်ဆင်ပြီးခွေးတွေကိုအားပေးပြီးခဏလေးပေးမယ့်ကြိုးတပ်ထားဖို့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးများ » ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့လမ်းလျှောက်မှုကဘယ်လောက်ကြာမလဲ
Neapolitan အဘိဓါန် Mastiff ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ